French masvomhu nyanzvi Fabrice Bellard, uyo akatanga iyo QEMU uye FFmpeg mapurojekiti uye zvakare akagadzira yakakurumidza fomula yekuverenga iyo Pi nhamba uye akagadzira iyo BPG mufananidzo fomati.
Fabrice Bellard ndiye inonyanya kuzivikanwa semutungamiriri anovandudza weQEMU (emulator inoteedzera akasiyana maumbirwo ehurdware) uye Tiny C Compiler (tcc), diki kwazvo asi yakazara C compiler, yakatanga kunyorwa kuhwina "International Obfuscated C Code Contest".
2 Ungawana sei SavaScript QuickJS?
Nekuita, QuickJS inonyanya kukunda anowanikwa akafananaSemuenzaniso, pabhenji-v8 bvunzo, injini yeXS iri 35% kumberi, DukTape yakapetwa zvakapetwa kaviri, JerryScript katatu uye MuJS kanomwe.
Uyewo, iyo qjsc compiler inowanikwa uye inokwanisa kuburitsa inogoneka mafaera ayo anogona kumhanya zvakasiyana uye kuti izvi hazvidi kutsamira kwekunze.
Yakakwana uye yakapusa kubatanidzwa mune mamwe mapurojekiti. Iyo kodhi inosanganisira chete maC mafaera asingade ekunze kutsamira pakuvaka. Chikumbiro chakareruka chakatorwa chinotora anenge 190 Kb
Kukwirira kwepamusoro uye kukurumidza kutanga nguva. Kupfuura makumi mashanu makumi mashanu ezviuru ECMAScript bvunzo yekuenderana inotora anosvika zana masekondi kana uchimhanyisa yakajairika desktop pane kernel. Runtime yekutanga inotora isingasvike mazana matatu emamayikosi
Inenge izere rutsigiro rweiyo ES2019 kududzirwa uye kutsigirwa kuzere kwe "B" kunyorera, iyo inotsanangura izvo zvikamu zvekuenderana neyekare webhu kunyorera
Pedzisa ndima yemiedzo yese yeECMAScript Test Suite
Iyo inounganidza marara inovimba nereferensi kuverenga pasina cyclical kuchenesa, ichibvumidza inofungidzirwa maitiro uye kudzikisira ndangariro kushandiswa
Shell yekushandisa kodhi mumirairo yemutsetse modhi, iyo inotsigira mamiriro ekodhi kuratidza
Compact yakajairwa raibhurari pamusoro peC raibhurari
Kuwedzera kune izvi, Kune rimwe divi, chirongwa ichi chiri kuvandudzawo matatu maC maraibhurari mapato ane hukama anobatanidzwa mu QuickJS uye anokodzera kushandiswa kwemunhu oga:
libunicode: diki diki Unicode raibhurari inotsigira kesi kutendeuka, Unicode yakajairwa, Unicode script zvikumbiro, Unicode general chikamu mibvunzo, uye ese Unicode binary zvivakwa
libbf: Iri zvakare raibhurari diki iyo inoshandisa IEEE 754 inoyerera poindi mashandiro uye transcendental mabasa ane chaiyo kutenderera. Iyo inochengetwa seyakasiyana chirongwa.
Ungawana sei SavaScript QuickJS?
Kudhanilodha kodhi yekodhi yekubatanidza kunogona kuitwa kubva chinotevera chinongedzo. Mushure mekumisikidzwa, Makefile inopihwa kuumbiridza injini paLinux kana Mac OS / X.
Mune imwechete yekubatanidza iwe unogona kubvunza iyo QuickJS zvinyorwa kuti uwane rumwe ruzivo. Inopawo ruzivo rwechiratidzo chinoratidza mashandiro eWatchJS neGoogle's V8 injini uye fananidzo pakati payo nezvimwe zvishandiso muchikamu chimwe chete.
Iyo nyowani vhezheni yeClonezilla Live 2.6.2 inosvika uye idzi ndidzo shanduko dzayo